Lisansa fananganana marijuana any Virginia - Ahoana ny fomba fampiharana
Ny lalàna dia misy koa ny famehezana mandeha ho azy ny fehezanteny rongony farany ambany, manangana programa ara-tsosialy ho fampiroboroboana ny fandraisana anjara amin'ny sehatry ny rongony ara-dalàna amin'ireo voa mafy indrindra tamin'ny ady amin'ny rongony, ary manokana 30% ny vola miditra amin'ny haba amin'ny Cannabis Equity Reinvestment Fund .
Betsaka - saingy tsy izy rehetra - amin'ny lalàn'ny lalàna dia mitaky latsa-bato faharoa amin'ny taona 2022, na “fampananganana indray.” Ny fepetra hametrahana ara-dalàna ny fananana rongony sy ny fambolena amin'ny 1 Jolay 2021 dia tsy mitaky famerenana miverina, na koa sazy ho an'ireo zaza tsy ampy taona manana rongony sy fepetra hamelana ny asa fanaraha-maso. Ny fepetra hanombohana ny firafitra mifehy sy ny fanarahana ara-dalàna ny varotra amin'ny 1 Janoary 2024 dia tsy mitaky famerenana indray. Ny ankamaroan'ny sazy vaovao - toy ny fitondrana rongony any Virginia - do mitaky famerenana miverina.
Fa inona no apetrak'ilay lalàna vaovao momba ny fahazoan-dàlana hanangana marijuana any Virginia?
Karazana fahazoan-dàlana hanangana marijuana any Virginia
Ireo volavolan-dalàna vaovao dia mametraka karazana fahazoan-dàlana miorina marijuana dimy any Virginia:
Fahazoan-dàlana hamboly marijuana: Manome alalana ny mpisava lalana hamboly, hanao marika ary handefasana marijuana antsinjarany; hividy na hananana zavamaniry marijuana sy masomboly avy amin'ny toeram-pambolena marijuana hafa; mamindra ny fananana sy mivarotra marijuana antsinjarany, zavamaniry marijuana tsy matotra, ary masomboly marijuana amin'ireo mpivarotra marijuana; mamindra ny fananana sy mivarotra marijuana antsinjarany, zavamaniry marijuana, ary masomboly marijuana amin'ireo toeram-pambolena marijuana hafa; ary hivarotra zava-maniry sy masomboly marijuana tsy matotra amin'ny mpanjifa mba hambolena rongony an-trano hampiasaina manokana:
Fahazoan-dàlana hanamboatra marijuana. Manome alalana ny tompona fahazoan-dàlana hamokatra, hametahana marika ary hamonosana marijuana amin'ny antsinjarany ary ireo vokatra marijuana antsinjarany; mividy na maka marijuana antsinjarany amin'ny toeram-pambolena marijuana na toerana fanamboarana marijuana hafa; ary hamindra ny fananana sy hivarotra marijuana antsinjarany sy vokatra ambongadiny amin'ny mpivarotra marijuana, fivarotana marijuana antsinjarany, na tranokala fanamboarana marijuana hafa.
Fahazoan-dàlana hizaha marijuana. Manome alalana ny tompona fahazoan-dàlana hividy na hanana marijuana antsinjarany amin'ny toeram-pambolena marijuana na toerana fanamboarana marijuana hafa; manamboatra, manisy marika, ary manangona marijuana antsinjarany sy vokatra marin-tampon'ny antsinjarany; ary ny famindrana ny fananana sy fivarotana marijuana antsinjarany sy vokatra ambongadiny rongony amin'ireo mpivarotra marijuana na toerana fanamboarana marijuana hafa.
Fahazoan-dàlana mpivarotra marijuana. Manome alalana ny tompona fahazoan-dàlana hividy na hanana marijuana antsinjarany, vokatra rongony antsinjarany, zavamaniry marijuana tsy matotra, ary masomboly marihuana avy amin'ny toeram-pambolena marijuana, toeram-pamokarana marijuana, na mpivarotra marijuana hafa ary hamindra ny fananana sy hivarotra na hivarotra marijuana antsinjarany. vokatra marijuana, zavamaniry marijuana tsy matotra, ary masomboly marijuana mankany amin'ny toeram-pamokarana marijuana, fivarotana marijuana antsinjarany, na mpamongady marijuana hafa.
Fahazoan-dàlana fivarotana marijuana antsinjarany. manome alalana ny tompona fahazoan-dàlana hividy na hanana marijuana antsinjarany, vokatra rongony antsinjarany, zavamaniry marijuana tsy matotra, na masomboly marijuana avy amina mpamongady marijuana ary hivarotra marijuana antsinjarany, vokatra marijuana antsinjarany, zavamaniry marijuana tsy matotra, na masomboly marijuana amin'ireo mpanjifa amin'ny toerana nankatoavin'ny ny Birao.
Ahoana ny fomba fangatahana lisansa fananganana marijuana any Virginia
Araka ny lalàna vaovao farany momba an'io, ity ny vaovao momba ny fangatahana fahazoan-dàlana hanangana marijuana any Virginia:
Ny olona mikasa ny hangataka fahazoan-dàlana alalana amin'ny lalàna vaovao indrindra dia tokony hametraka amin'ny Birao fangatahana fangatahana amin'ny taratasy natolotry ny Birao ary fanambarana an-tsoratra nataon'ny fianianana izay nianiana ary nanamafy fa ny fampahalalana rehetra ao anatiny dia marina.
Ireo mpangataka fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa izay takiana amin'ny fomba hafa hanaraha-maso ny Sampan-draharahan'ny Fambolena sy ny Serivisy ho an'ny mpanjifa dia tokony hanome porofon'ny fanaraha-maso na porofon'ny fangatahana miandry izany fanaraha-maso izany.
Raha manome porofo ny fizahana na porofon'ny fangatahana miandry ny mpangataka, dia azo omena lisansa ny mpangataka. Raha misy fahazoan-dàlana navoaka noho ny fangatahana na fanaraha-maso miandry, ny fahazoan-dàlana toy izany dia manome alalana ny tompona fahazoan-dàlana hividy marijuana antsinjarany, vokatra marijuana antsinjarany, zavamaniry marijuana tsy matotra, na masomboly marijuana; na izany aza, ny manana fahazoan-dàlana dia tsy tokony hivarotra marijuana antsinjarany, vokatra marijuana antsinjarany, zavamaniry marijuana tsy matotra, na masomboly marijuana raha tsy vita ny fizahana.
Ny mpangataka fahazoan-dàlana tsirairay avy dia tsy maintsy mandefa fampandrenesana ny fangatahany fangatahana amin'ny Birao eo am-baravaran'ny trano, toerana na efitrano izay kasainy hirotsahana amin'ny asa toy izany mandritra ny 30 andro ary tsy latsaky ny 10 andro.
Ny fampandrenesana toy izany dia habe ary mirakitra fampahalalana araka izay takian'ny Birao, ao anatin'izany ny fanambarana fa misy fanoherana tokony hatolotra ny Birao tsy mihoatra ny 30 andro aorian'ny fandefasana voalohany ny fampandrenesana takiana mifanaraka amin'io laharana io.
Ny mpangataka dia tokony hamoaka koa ny fampandrenesana farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro mandritra ny roa herinandro misesy ao amin'ny gazety navoaka na manana fivezivezena ankapobeny ao amin'ny distrika, tanàna, na tanàna izay anoloran'ny mpangataka azy hanao raharaham-barotra toy izany.
Ny fampandrenesana toy izany dia mirakitra fampahalalana araka izay takian'ny Birao, ao anatin'izany ny fanambarana fa ny fanoherana ny famoahana ny fahazoan-dàlana dia alefa amin'ny Birao tsy tokony hihoatra ny 30 andro aorian'ny famoahana ny gazety voalohany.
Ny Birao dia hanao famotopotorana ifotony, mba hampidirina ny fikarohana rakitsoratra tantara heloka bevava, izay mety misy ny fikarohana ny rakitsoratry ny tantaram-pirenena momba ny heloka bevava, isaky ny mpangataka fahazoan-dàlana.
Ny Birao dia afaka manary, amin'ny antony tsara aseho, ny fitakiana fitadiavana tantara an-tsoratra heloka bevava ary fenoina antontan-taratasy momba ny tompon'andraikitra, tale, mpikambana tsy mitantana, na mpiara-miasa voafetra amin'ny orinasa mpangataka, orinasa tompon'andraikitra voafetra, na fiaraha-miasa voafetra.
Rehefa mandinika ny fampahalalana momba ny tantaran'ny heloka bevava, ny Birao dia tsy hanafoana ny fangatahana mpangataka noho ny faharesen-dahatra taloha noho ny heloka mifandraika amin'ny rongony.
Ny Birao dia mampandre ny filan-kevi-pitantanana eo an-toerana isaky ny fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny mpitantana ny tanàna, mpitantana ny tanàna, mpitantana ny distrika na olona tendrena hafa amin'ny faritra.
Ny filan-kevi-pitantanana eo an-toerana dia handefa fanoherana ny fanomezana fahazoan-dàlana ao anatin'ny 30 andro aorian'ny fametrahana ny fangatahana.
Ny mpangataka tsirairay dia mandoa ny sarany fangatahana takiana amin'ny fotoana anaovana ny fangatahana, afa-tsy ny fandoavana izany fihenam-bidy izany ho an'ireo mpangataka ara-tsosialy mahafeno fepetra mifanaraka amin'ny fitsipika apetraky ny Birao.
Ny saran'ny fangatahana fahazoan-dàlana dia faritan'ny Birao ary ho enti-miampy ny tena vola lany amin'ny Departemantam-panjakana amin'ny alàlan'ny Birao Federalin'ny Fanadihadiana na ny Central Criminal Records Exchange ho an'ny fanodinana ny dian-tanan'ny tanan'ny Federal Bureau of Investigation na ny Fifanakalozana Central Criminal Records fifanakalozana isaky ny fikarohana ny tantaran'ny heloka bevava takian'ny Birao. Ny sarany fangatahana dia ho fanampiny amin'ny saram-panjakana ary tsy haverina.
Ny manana fahazoan-dàlana rehetra dia tokony handrindra sy hitahiry amin'ny Birao ny firaketana an-tsoratra marim-pototra momba ny fampahalalana takian'ny Birao ary hampandre ny Birao ny fanovana rehetra momba izany fampahalalana izany mifanaraka amin'ny fitsipiky ny Birao.
Ny fangatahana fahazoan-dàlana omena rehetra dia amin'ny endrika natolotry ny Birao. Ny fahazoan-dàlana toy izany dia tsy tokony hanome fahefana ny tompony hanao fangatahana ao amin'ny Commonwealth.
Ny sarany amin'ny fahazoan-dàlana vonjimaika dia roa ambin'ny folo amin'ny sarany mitambatra takian'ity fizarana ity ho an'ireo fahazoan-dàlana mihatra hivarotra marijuana antsinjarany na vokatra marijuana antsinjarany voaisa amin'ny cent akaiky indrindra ary ampitomboina amin'ny isan'ny volana nahazoana izany fahazoan-dàlana izany.
Fampiasana olon-dehibe sy fambolena an-trano
Manomboka ny 1 Jolay 2021:
Ny olon-dehibe izay 21 taona na mihoatra dia mety manana ganja iray grama, na vokatra mitovy amin'ny rongony, ary afaka manome ny mitovy habe amin'ny olon-dehibe hafa.
Ny olon-dehibe dia afaka namboly zava-maniry rongony efatra tamim-pilaminana sy tamim-pahamalinana tao amin'ny trano fonenany voalohany. (Mihatra amin'ny tokatrano ihany koa ny satrin'ny zavamaniry efatra.) Ny zavamaniry tsirairay dia tsy maintsy misy marika misy famantarana momba ilay mpamboly.
Manana mihoatra ny ondrama, fa tsy mihoatra ny iray pounds, dia hosaziana amin'ny sazy sivily hatramin'ny $ 25.
Ny fananana mihoatra ny iray pounds dia mety hiafara amin'ny 1-10 taona an-tranomaizina.
Ny Birao dia hametraka ny isan'ny manana fahazoan-dàlana, izay tsy mihoatra ny 400 mpivarotra, mpivarotra ambongadiny 25, mpamboly 450, ary mpanamboatra vokatra 60. Tsy hisy izany raha tsy isaina ny orinasa rongony ara-pahasalamana sy mpanodina hemp. Hanaiky ny laboratoara ihany koa izy io.
Izy io dia mamorona karazana fahazoan-dàlana mamboly roa: fahazoan-dàlana Class A, izay voafono amin'ny tongotra metatra toradroa na zavamaniry iray. Ny kilasy B dia hoferana ho 1% THC.
Izy io koa dia hametraka mason-tsivana hanombanana ireo manana fahazoan-dàlana vaovao mifototra amin'ny hakitroky ny fivarotana antsinjarany ao amin'ny fiarahamonina ary handinika izay vokadratsin'ny fahasalamam-bahoaka ratsy eo amin'ny fiarahamonina.
Ny fivarotana dia tsy maintsy aparitaka ara-jeografika. Ny fanaparitahana azy ireo dia mila averina jerena aorian'ny isaky ny fahazoan-dàlana 100.
Mampiroborobo ny fampidirana amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny laharam-pahamehana ireo mpangataka ny ara-tsosialy.
Ny volavolan-dalàna dia manameloka ny "mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy" ho manana tompona 66% na mihoatra izay: manana fiampangana rongony mialoha, manana havana akaiky miaraka amin'ny fanamelohana rongony, miaina na amin'ny faritra misy fisamborana rongony tsy mifandanja na sahirana ara-toekarena, na nahazo diplaoma tamin'ny a Virginia HBCU.
Ny mpangataka ny ara-tsosialy dia homena tombony manomboka ny 1 Jolay 2023 hatramin'ny 1 Janoary 2024. Hofoanan'ny mpandrindra ny isan-jaton'ny sara.
Mamorona ekipa mpanohana rongony rongony sy ekipa fahasamihafana hamantarana ireo sakana amin'ny fampidirana, fanampiana ara-teknika, fanentanana ary fampivoarana ny fepetra takiana amin'ny drafitra fahasamihafana, fitoviana ary fampidirana.
Ny vaomiera mpanolotsaina fahasalamana ho an'ny daholobe vaovao 21-mpikambana dia hanombana sy hanara-maso ny fiantraikan'ny fahasalamam-bahoaka ary hanao tolo-kevitra, ao anatin'izany ny fampitandremana ny fiarovana ny vokatra rongony sy ny firafitry ny vokatra ary ny fanentanana ny fahasalamam-bahoaka.
Ny volavolan-dalàna dia misy ny fepetra takiana amin'ny fanarahana ny voa, ny famonosana ary ny fametahana labozia - ao anatin'izany ny tanjaka sy ny fanajana ny marika fampitandremana - ary mitaky fampahalalana noforonin'ny fanjakana momba ny loza mety hitranga amin'ny fivarotana. Fanaterana, varotra miorina amin'ny Internet,
Ny mpandamina dia hametraka torolàlana momba ny fahasalamana sy ny fiarovana ny besinimaro amin'ny fambolena ao an-trano ihany koa, ao anatin'izany ny fiarovana ny ankizy sy ny fisorohana ny fanelingelenana, ao anatin'izany ny fofona.
Ny hetra amin'ny fanjakana 21% amin'ny vidin'ny varotra antsinjarany dia heverina, ankoatry ny hetra amidy 6%. Ny haba dia tsy mihatra amin'ny varotra rongony ara-pahasalamana avy amin'ny dispensaries ara-pitsaboana.
Ny eo an-toerana dia afaka mametraka hetra hatramin'ny 3% amin'ny varotra amin'ny mpanjifa ao amin'ny kaominina.
Fampindramam-bola tsy misy sy zanabola ho an'ireo mpangataka fananana ara-tsosialy.